Tsangambato tranainy, sarintany vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2020 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Ελληνικά, Español, Français, srpski, English
Sarintanin'izao tontolo izao nataon'i Cantino, ahitana fampahafantarana ara-jeografika mifototra amin'ny andiam-pandratoana dia miisa efatra: Columbus amin'i Karaiba, Pedro Álvarez Cabral amin'i Brezila, Vasco de Gama narahan'i Cabral ho an'i Afrika atsinanana sy India, ary ry mpirahalahy Corte-Real amin'i Greenland sy Newfoundland. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Ny endrika ôrizinaly amin'ny lahatsoatra etsy ambany dia navoakan'ny mpanoratra ao amin'ny pejy Facebook-ny.
Misy dikany ireny tsangambato ireny. Matetika isika no voatery miandrandra raha hijery azy ireny. Tsy niniana amin'ny arsitektiorany ny fahasamihafana amin'ny haavony, ny itazanana azy lavitra: izay heverintsika amin'ny toerana avo, ny fametahana azy amin'ny fitoerantsariolona, ny iarovana azy amin'ny tady milokom-bolamena.
Azonao atao ny manontany izay mpikambana amin'ny finoana roa lehibe ao Trinite sy Tobago, ny Katôlisisma sy ny Haindoisma, amin'ny dikan'ny tsangambato: Krishna mitsikitsiky anaty malas etsy, Kristy miaraka amin'ny labozia mandrotsa-dranomaso eo amin'ny tongony misy dian'ny voafantsika eroa. Ankelezintsika ihany koa izy ireny ho sahaza ny efitra puja sy ny fivavahana grottos, mampivondrona azy ireny ao anaty fikasana feno fivavahana. Samy miara-miaiky isika fa tsy andriamanitra ireny, fa ireny no mpanalalana an'andriamanitra ho amintsika.
Andriamanitra ve ny tsangambaton'i Christoper Columbus? Tsia dia tsia. Ary na izany aza.
Nanoratra ny Jamaikana mpanao tantara an-tsoratra Michelle Cliff tao amin'ny tantarany an-tsoratra milaza amin'ny ampahany ny fiainany nivoaka tamin'ny taona 1984 mitondra ny lohateny hoe “Abeng” ny amin'ireo tapa-biby mampatahotra inoan'i Columbus fa hitany tao amin'ny Tontolo Vaovao:
“Zavamananaina alika ny lohany fa olombelona ny vatany. Olona manana elatra fa tsy afa-manidina. Zavamananaina toka-tongotra mivoaka avy eo an-tampondohany, zava-tokana miasa manaloka azy ireo eo ambany masoandro mahamay.”
Lahatsora-panoherana ny imperialista tsy raharahian'ny tantara raketin'ny ampira eoropeana fotsy hoditra i “Abeng”. Ny sokitr'io ampira amin'ny tantaram-pirenana Jamaikana io no ifanandrinan'i “Abeng” hatrany ifotony. Anontaniany ihany koa ny fanontaniana iray mitovitovy amin'ny an'ilay poeta Barbadiana Kamau Brathwaite ao amin'ny “The Cracked Mother”, izay ampahany amin'ny sanganasan'i Brathwaite navoakany tamin'ny taona 1973, “The Arrivants: A New World Trilogy”:
“ahoana ny handrafetana ny sarintany vaovao?
Iza no hahasahy hametraka sisintany vaovao?
Ahoana moa no iposahan'ny lanitra ankehitriny?”
Amin'ny ankapobeny ny “The Arrivants” miangavy antsika hifanandrina tamin'ny sisintany anatiny izay natsangatsika vahoakan'i Karaiba, ho fiarovana/setriny amin'ny sisintany nosoritan'ny herin'ny ampira mba hahitana ny misy antsika, hamponina antsika sy hampiondrika antsika eo anoloany. Averimberin'ny “The Arrivants” io fanontaniana io: iza no handrafitra ny sarintanintsika vaovao? Iza amintsika no hanome lanja antsika?
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy aho izay nihaino ireo olompirenena miezaka ny mandresy lahatra ahy amin'ny lanjan'ireo tsangambaton'i Columbus. Niteny tamiko ireo lehilahy sy ireo vehivavy ireo fa mpitety ranomasina mahafinaritra tsapan-dry zareo omena fankasitrahana i Columbus, sy iray amin'ireo ray mpanorina ny tantaram-pirenentsika, manoritra hatrany amin'ny fanombohan'ny fototra indrindra antsika. Fanampin'izany, nilazana aho fa raha esorintsika izy, dia hatraiza izany no hitsahatra? Lasa voatery isika hanaisotra ny zavatra rehetra nataon'ny mpanjanatany ato amin'ny firenentsika, sy ireo firenena karaibeana tsy tambo isaina.
Amin'ny fanombohana mieritreritra ny fanongotana ireo tsangambaton'ny ampira teo aloha, mandidy ny lohan'ireo vita amin'ny marbra, ary manosika ny (vatany) alabastara fangeren'ny voromailala any amin'ny seranantsambontsika, dia efa fiezahana sy sisintany vaovao ho an'ny maro amintsika. Tsy ho hetsika, na fanoherana na fandinihantena ao anatin'ny eritreritra mpankafy Columbus ao an-toerana velively izany: ho azy ireo, tsy ho manapaka ihany ny sarintany tranainy, fa tokony hanapaka hatrany, tsy jerena ny habetsahan'ny râ latsaka tamin'izany. Tena mandiso fanantenana azy ireo tanteraka ny jereny ho fampisehoana maharikoriko ny fikatrohana amin'ny vanim-potoana ankehitriny, indrindra rehefa fiezahana tsy ankiteniteny hanombohana hananganana sarintany vaovao. . . ary raha voatery hanohana hetsika tahaka izany ny pro-Columbus amin'ireo resaka eo an-databatra (misakafo), dia hampihevitra izany fa efa simba tanteraka ny rafitra tranainy an-dry zareo.
Iza no te-hino fa tsy voarafitra araka ny tokony ho izy ny sarintany nampiasain-dry zareo nandritra ny androm-piainany, izay efa nampiasain'ny ray aman-dreniny? Hanomboka hanaiky fa tsy ilaozan-desoka ny anganongano aorian'ny fanjanahantany amin'ny hoe “miasa mafy, mafy, mafy, mankatoa ny fitsipika, ataovy izay hahatonga ny zanakareo ho dokotera sy mpanao lalàna, dia ho azonareo ny fahombiazana, mety hisotroronono any Florida aza ianareo”. Ny fanombohana mieritreritra fa namotika anao ny fomba fihevitrao ny tantara dia fankatoavana, anaty hidihidin-damosina, fa tsy salama ianao teo ambany mason'ny sampy iray na roa.
Nomen'i Christopher Columbus valisoa ireo olona nanaraka azy notolorana tanora ho andevony hanaovany ny filàny ny nofo. Izao ny teniny tamin'ity raharaha manga ity: “mora azo ny castellanoes hahazoana vehivavy iray na toeram-pambolena (fiompiana) iray, ary tena safobemantsina izany, ary maro ny mpivarotra no mandeha mitady zazavavy maro; ireo sivy mankany amin'ny folo (taona?) izao no be mpitady. “
Ka izany ireo manandoha alika, manana elatra tsy misy ilaina azy, ireo olona mampatahotra avy amin'ny faritra manodidina ny ampira lasa entambarotra eo ampelatanan'ny mpandrombaka: noterena ho mpiasa tany, mpitari-dia ao an-toerana, ho ondana nofo lavahana anaty habibiana. Toa izany ihany koa, maro amintsika no miteny fa izany no sandan'ny tantaram-pirenentsika: tsy ny mahalala azy ihany, fa manangana sary sokitra kely vita amin'ny vato hotehirizina amin'ny rakitry ny helony bevava. Ho ahy, ampy ahy ny tsy mitahiry ny tsangambaton'ny mpanangom-panolanana, na amin'io vanim-potoana io na amin'ny vanim-potoana rehetra. Ho an'ny hafa, ny tanjona no anamarinana ireo taolana tapatapaka sy ireo reniranon-dra—ary aoka hazava, tsy mandrisika ireo hafa ireo aho. Tsy manao afa-tsy ny mieritreritra izay hitan-dry zareo fa manantantara aho.
Raha mbola mitohy ity adihevitra ity, amin'izao taona 2020 izao eto amin'ny nosintsika, vonoina amin'ny tifitifitra ny kilonga, tapahan-doha any amin'ny trano nilaozana ny tanora. Matin'ny herisetra an-tokantrano na vehivavy na ankizy na lehilahy. Taritaritina ivelan'ny tranony ny zazalahy ary darohana amin'ny fantsona PVC mandra-pahatonga ny taovan-dry zareo ho maimbo tahaka ny voankazo lò. Isika, ny ankamaroantsika, mampifangaro ny tsara indrindra azontsika atao sy ny kely indrindra ilaina hiavotantsika. Manomboka mihira ny moka mitondra dengy ny tazom-pifidianana.
Mbola mijery hatrany i Christopher Columbus, ilay tsy voaaisotra.